Amin'izao fotoana izao, misy làlana famokarana 2 samihafa eo amin'ny indostrian'ny BOPET, ny iray dia slicing, ny iray hafa dia melting mivantana. Talohan'ny taona 2013, ny tsena dia nifototra tamin'ny fizotran'ny slice, fa aorian'ny 2013 dia nampidirina ny dingana fiompiana. Araka ny antontan'isa nataon'i Zhuo Chuang, tamin'ny faran'ny ...
PX no akora mivaingana indrindra amin'ny indostria polyester ， Ny fiovan'ny orinasany dia misy fiantraikany lehibe amin'ny indostria manokana. miditra amin'ny fomba ofisialy ny fampandrosoana ny fahaizan'i Shina ao amin'ny Xylene Road Research. Jereo aloha ny famatsiana PX manerantany sy de ...
Ny 28 septambra teo, ny hetsika eo an-toerana amin'ny taona Suqian Green Industry Expo, dia nanatanteraka ny fisokafana lehibe tao amin'ny foibe fampirantiana Suqian. Ny lohahevitr'ity Green Fair ity dia "maintso, fampidirana ary fitsangantsanganana", mifantoka amin'ny indostrian'ny maitso sy ny toekarena ekolojia hanatanteraka ny fifampiraharahana ara-toekarena sy varotra ...
Nitsidika ny Genzon Novel Materials ny governora lefitr'i Jiangsu
Tamin'ny 25 septambra, ny federasiona fampiroboroboana ny tetik'asa fampiroboroboana ny tetibolan'ny faritany Jiangsu dia natao tao amin'ny faritany Shuyang, tanàna Shuqian. Ny fivoriana dia nifantoka tamin'ireo tetikasa lehibe mifototra amin'ny faritany sy ny famokarana hanentana ny fivoriana. Mpikambana ao amin'ny faritany mifandraika ...
ISO9001: 2015 Rafitra fanaraha-mason'ny rafitra fanofanana momba ny fanofanana
Tamin'ny 13 Desambra, GENZON Novel Materials dia nanatontosa fiofanana mahazatra roa andro ho an'ny fanontana 2015 momba ny rafi-pitantanana kalitao. 48 ny isan'ireo olona nandray anjara tamin'ny fampiofanana. Toerana fiofanana Amin'ny fiandohan'ny fihaonana dia Atoa Zhang Tao, masoivoho consulting any Valin, no nanome voalohany ...
Hatramin'ny nahavitan'ny Genzon Novel Fitaovana ny fampifangaroana sy ny fananganana indray ny fananana ary nahatsapa ny fiandohan'ny fanombohan'ny famokarana, amin'ny lafiny iray…
Hatramin'ny nahavitan'ny Genzon Novel Materials ny fampifangaroana sy ny fananganana indray ny fananana ary nahatsapa ny fanombohan'ny lanjan'ny famokarana, kosa, amin'ny lafiny iray, Genzon dia nifantoka tamin'ny fampidirana talenta avo lenta, fananganana rafitra ary rafitra fiofanana momba ny olona, ​​amin'ny lafiny iray, manatanteraka marika vaovao ...